विघटनमा अन्तरिम आदेश जारी होला ? - नेपालबहस
विघटनमा अन्तरिम आदेश जारी होला ?
२६ जेठ, काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा त्यसविरुद्ध लगभग अढाई दर्जन रिट परे । ती सबै रिट उपर आजबाट बल्ल विषय केन्द्रित वहस सुरु भएको छ । रिट निवेदकले विघटन संविधान विपरीत भएको भन्दै खारेजीको मागसहित अन्तरिम आदेशको माग गरेको छ ।
आज दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ताहरु महादेव यादव र शम्भु थापाले वहस गरेलगत्तै न्यायधीशहरु अलग्गै छलफलमा बसेका छन् । छलफलमा बस्नअघि वहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता थापालाई न्यायधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाले प्रश्न गरेका थिए– ए, तपाईहरुले त अन्तरिम आदेशसमेत माग्नुभएको छ क्यार हैन । जवाफमा थापाले माग गरेको बताएका थिए ।
थापाको वहस टुंगिने वित्तिकै इजलाशका न्यायधीशहरु छलफलमा जुटेका छन् । सम्भवतः प्रस्तुत रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने की नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा न्यायधीहरुले एकल धारणा बनाउन आन्तरिक छलफलमा जुटेको स्रोतले बतायो । अब टी ब्रेकपछि बस्ने इजलाशले यसबारे आदेश सुनाउने पनि बताइएको छ ।
इरानको नयाँ राष्ट्रपतिमा ६२ प्रतिशत मत ल्याएर इब्राहिम निर्वाचित २ दिन पहिले
तीन हाइड्रो कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च गिरावट, शेयरमूल्य कति ? १ दिन पहिले
बन्द रहेको नर्भिकको ओपिडी आइतबारदेखि सञ्चालन हुने २ हप्ता पहिले
कोरोनाबाट जर्नेल दिनेश केसीको मुत्यु, नेपाली सेनाद्धारा दु:ख व्यक्त ४ हप्ता पहिले
राउटे युवतीमाथि हिंसा गर्नेलाई कडा कारबाहीको माग १ हप्ता पहिले
बन्दाबन्दीको रिक्सा चालक ९ महिना पहिले
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट कामचलाउ प्रकृति : नेपाली कांग्रेस २ वर्ष पहिले
कैलालीमा निषेधाज्ञा लम्ब्याइयो २ महिना पहिले
दोहोरो नागरिकता बनाएर दुरुपयोग गर्ने एक जना नियन्त्रणमा ३ महिना पहिले